HODAN NAALLEEYE: Hoggaamiyihii bilaa XILKA ahaa!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada HODAN NAALLEEYE: Hoggaamiyihii bilaa XILKA ahaa!!
HODAN NAALLEEYE: Hoggaamiyihii bilaa XILKA ahaa!!
(Hadalsame) 14 Luulyo 2019 – Muddo imminka laga joogo kun sano iyo dheeraad ayaa waxaa dhacday qiso taariikhda gashay. Boqorkii dowladdii reer banii Umaya ee la oron jiray Hishaan bin Cabdil-Malik ayaa maalin xaramka yimid, isaga oo ay hareer socdaan, ciidankiisii iyo madaxdii kale ee dowaladdu.
Kuwii la socday ayaa amakaag dartii is hayn waayey. War ninkani muxuu ahaa dadku ixtiraamayaan? Adigaba cidna kuma soo dhawayne? Boqorkii isaga oo is khaafinaya ayuu ku tiraabay, “ma garanayo”. Maanso yahankii waynaa ee Farasdaq ayaa ciil isla hayn waayey oo tix taariikhda gashay ugu jawaabay boqorkii. Wuxuu Farasdaq ku maansooday in ninkan uu inkirayo uusan isaga aqoonsi uga baahnayn, ee makhluuqa Ilaahay wada garanayaan, awoowgiisna yahay Nabi Muxammad CS. Waa tan qayb maansada ka mid ah:
Hoggaamintu sideedaba magac ma aha, kursi lagu fariistana waa ay ka gudo wayn tahay. Waxaa jira dad aan waligood xil loo dhiibin oo bulshada saamayn ku yeeshay, is beddel muuqdana la yimid.
John C Maxwell, waa khaabiir 72 sano jira. 47 sano oo uu cilmiga hoggaaminta darsayey iyo 70 buug ee uu qoray, waxa uu ku soo koobay in hoggaamintu sideedaba aysan saamayn ka soo harin.
Laakiin, haddii aan meel dhow kaa tuso arrinka..waxaad u fiirsataa geerida iyo noloshii Hodon Naaleeye. Hodon waxay ahayd hoggaamiye is beddel doon ah. Hooggaamiye aan xil-hayn, haddana ka saamayn badatay kuwo kuwsi dartiid dhiig u qubay. Hadafku waa adeegga bulshada, si aad kaalintaada uga soo dhalaashidna uma baahnid in cid gaar ahi xil kugu rarto ama heeso laguu qaado oo lagu ammaano.
Waxaa Qoray: Qaamuus Nuur Dirir
Previous articleAC Milan oo qarka u saaran saxiixa laba laacib oo muhim ah macallinkeeda cusub
Next articleLabada qarax ee Dhuusamareeb ka dhacay midkoodna maaha sidii la moodayay (Warkii ugu dambeeyay)